Vircadia: isingazivikanwe social network iwe yaunofanirwa kuziva | Linux Vakapindwa muropa
vircadia, namatira nezita iri sezvo pangangodaro paine hurukuro zhinji kubva zvino zvichienda mberi. Chokwadi ndechekuti hapana chinhu chitsva zvakanyanya, asi chinosanganisa zvimwe zvinhu pasi pechinhu chimwe chete chinonakidza chakavhurwa sosi purojekiti. Pamberi pezita iri pasununguka pasocial network.
Iwe zvechokwadi unorangarira ane mukurumbira Hwechipiri Hupenyu hwemagariro vhidhiyo mutambo izvo zvakakonzera furor munguva yakapfuura. Zvakanaka, Vircadia yakasikwa kubva kune mutsivi weuyu akazove asina kubudirira uye yaive zvakare yemahara uye yakavhurwa sosi. Pakutanga ichizivikanwa seAthena Project, ikozvino yadzoswazve pasi peichi chimwe zita rinonyanya kutengeswa, uye yatanga kushambadzira kuti itariswe.
Inovavarira kuve yechimurenga pasocial network iyo isingazovakirwe pamhando yakapfava yezvifananidzo, mavhidhiyo kana zvinyorwa senge zvakajairika social network. Zviri nezve 3D chaiyo nzvimbo yekugovana nedzimwe nhengo, sekureba sekunge yako Hardware ichitsigira chaiyo chaiyo uye iine Linux, macOS, Windows kana Android inoshanda sisitimu.
Iyi nzvimbo inobvumidza vanhu kuti vagadzire iyo wega avatar, nenyika dzavo uye nezvimwe zvakawanda. Iyo pfungwa ine kukwezva kwayo uye inonzwika kunge yakanaka, kunyangwe mamiriro azvino eprojekiti achiri Beta, saka iri mune yakasarudzika vhezheni.
Zvakadaro inoshanda uye yakagadzirira kushandisa kugadzikana zvakakwana. Nekudaro, inoda yakawanda yekuvandudza uye yakawanda basa pamberi payo. Uye zvakare, vagadziri vayo vanonetsekana kuti rutsigiro rweLinux rwakaringana, nekuti ndiyo nzira hombe inoshandiswa nevamwe vashanduri vayo.
Kana iwe uchinetseka kuti chii chingaitwe mune aya chaiwo epasirese, chokwadi ndechekuti iwe unogona kushamwaridzana neshamwari uchishandisa avatar yako uye kumutungamira iye ino nyika, tamba mitambo, tarisa mabhaisikopo, inogona kutoshandiswa kune zvimwe zvakakomba zvinhu senge pinda misangano yebasa. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti haina kuganhurirwa, uye inogona kuchinjwa kuti iumbike kune kwako kufarira ...
Mamwe mashoko - Vircadia Yepamutemo Saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vircadia: isingazivikanwe social network iwe yaunofanirwa kuziva
Pfungwa yakafanana yakaonekwa mumuvhi "Ready Player One", iine online "universal" ine mukana kubva kune chaiye. Handizoshamiswa kana zvikave zvakanyanya, zvakafanana.
Uku kupukunyuka kubva pachokwadi icho chikamu chikuru chevanhu chinoda kunobva munguva dziri kure kwazvo (mitambo, zvinokuvaraidza, zvinwiwa, zvinodhaka, kudanwa, nezvimwewo), uye software iyi - sevamwe vazhinji nhasi - inongobatsira iyo "Kubuda", tichishandisa nguva yedu. uye zvakavanzika sechinhu chekutaurirana, icho - sekuziva kwedu tese - chinozopedzisira chava mari zvakare (kurudyi, facebook / tiktok / twitter / instagram /…?).
Kunyangwe ndichifarira tekinoroji nemikana yayo, ini ndichiri kuda zvakavanzika zvangu nenguva, saka ndichaedza kutiza neimwe nzira, sarudzo dzese dziripo dzakawanda. Asi ini handizive, pamwe chimwe chinhu chinganditungamira kuti pakupedzisira ndipinde (ndachembera pamwe), uye zvichaitika senge nefb: nguva yangu haichazove yangu.